MySQL Ajụjụ maka ịdọrọ ngalaba na WordPress | Martech Zone
Wednesday, June 6, 2007 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, ọ pụtara na ihe ndị m dere banyere ndụ ụlọ m pụtara ị nweta nlele peeji karịa karịa isiokwu ndị ọzọ. Ọ ga-akwado na njirimara onwe onye nke ịde blọgụ bụ ihe na-adọta ọtụtụ ndị na-agụ ya ka m wee chọọ ịchọpụta. Ihe ọ bụla m dere na-emetụ ndụ m, m na-agbakwunye otu ajụjụ a kapịrị ọnụ. A na-eji edemede ndị ọzọ eme ihe dabere na ọdịnaya. Emere m nke a na nzube ka m nwee ike mechaa kọọ akụkọ banyere ya. Oge ahụ eruola!
Ọ dịghị mfe dịka ị nwere ike iche iji chọpụta, n'agbanyeghị. Usoro dum were m awa ole na ole site na data ịkọ! Ihe ịma aka nke mbu na-ewepu data n'ime nchekwa data blog m. Na WordPress, ọ chọrọ ọmarịcha njikọ ajụjụ n'etiti tebụl atọ, posts, posts2cats, na edemede. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nke a, lee ajụjụ a:
Họrọ `` post_date`, `` cat_name` FROM 'wp_posts` ekpe' 'wp_post2cat` ON `wp_posts`.ID =` wp_post2cat`.post_id LEP JOIN `wp_categories` ON` wp_categories`.cat_ID = `wp_post2
Mara na ị ga-enweta ihe karịrị otu ndekọ azụ kwa post ma ọ bụrụ na ị họrọla ọtụtụ edemede na post. Nke ahụ dị mma, m na-emeso nke ahụ na nyocha m.
Google na - eme ka ọ dị mfe ịdọrọ data site na ụbọchị ị chọrọ ma bupụ ya dị ka faịlụ CSV. Naanị m wetara otu ụbọchị na ọnụ ọgụgụ nke ibe ihu. M wee jikota isi mmalite abụọ, ederede blọọgụ na edemede yana echiche ibe metụtara. Ihe ọchị!
Nzọụkwụ ọzọ bụ ihe ọchị! Enwere ọtụtụ ajụjụ na usoro ị ga-agabiga (achọghị m ịbanye na nkọwa ahụ ebe a) mana isi ihe bụ na achọrọ m ịgbakọ ọnụọgụ peeji nke ekewapụrụ site na ọnụọgụ nke ọkwa na ụdị nke ọ bụla. M wee gbakọọ nkezi echiche kwa post gafee blog niile ma jiri ya tụnyere nsonaazụ.
Ihe ị na-ahụ n'okpuru bụ nyocha nke Index nke Echiche Peeji site na Otu. Pịa na ihe oyiyi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya nha. Ndepụta nke 100 bụ nkezi. Nkọwapụta nke 200 pụtara na ụdị ahụ nwere okpukpu abụọ nke nkezi post. Ndepụta nke 50 bụ ọkara ọkara.
Ọ bụchaghị ihe m tụrụ anya ya, mana m chere na ụfọdụ n'ime ya nwere ezi uche. Na njedebe dị ala nke ọnụ ọgụgụ (n'aka nri), anyị na-ahụ ụfọdụ isiokwu juputara, ọ bụghị anyị? Ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Teknụzụ, Azụmaahịa, ịde blọgụ, wdg Anyị na-ahụkwa ụfọdụ isiokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ, dị ka Google Maps. Ebe ọ bụ na ọ bụghị isiokwu bụ isi nke blọọgụ m, o doro anya na m na-adọta mmasị dị ukwuu maka nke ahụ.
Homefront fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe etiti! Echere m na ọ ga-egosi elu karịa eziokwu ahụ bụ na ọ naghị n'okpuru-index na-agwa m na ọ nweghị ụzọ na-emerụ blog m. Ọ na-enyere aka? Ikekwe na njigide, ma ọ bụghị echiche ihu igwe.
Ihe na-ebigbọ n'elu bụ mpaghara ọkachamara m nwere. Nchịkọta… chaị! Echere m na nke a bụ mpaghara isiokwu na-eti mkpu maka enyemaka. Enweghi oke web nchịkọta blọọgụ si n'ebe! Ndị mmadụ chọrọ ịma etu esi eji ya nchịkọta, otu esi eme ya, na otu esi akuko ma mee mgbanwe dabere na ya (dika post a!).
Ihe ọzọ na-atọ m ụtọ bụ “agụm ụbọchị” m. Echere m n’ezie na ndị ahụ ga-adị n’etiti okporo ụzọ, mana ha dị elu n’ezie. Ndị mmadụ nwere mmasị n'ihe m na-agụ ma na-agwa ha! Nke ahụ dị mma. Kwa ụbọchị m na-agụ ọtụtụ narị faili ntanetịime na saịtị ma m na-agbalị ịkọghachi akụkọ pụrụ iche nke ndị mmadụ ga-enwe obi ụtọ. Ọtụtụ oge, ndị a bụ njikọ blọọgụ ndị ọzọ na-atọ m ụtọ ma chọọ ịgafe. O yiri ka ndị enyi na-etinye aka na nke a na-akwụ ụgwọ!
E nwere ya! A afọ bara uru nke na-agụ data! Ọ ga-amasị m ịme ka ọ dịkwuo mfe ịme nyocha a oge ọzọ. Achọrọ m ịrụ ọrụ na akpaghị aka na edemede n'ime m nchịkọta akụkọ ka m wee lekwasị ha anya nso.
Jun 7, 2007 na 5:40 AM
Ihe m na-achọta na-adọrọ mmasị gbasara Daily agụ ọgụgụ bụ m adịkarịghị, ma ọ bụrụ na mgbe, na-agụ njikọ ndepụta posts. Ma ọ fọrọ nke nta ka m na-ahụkarị ka m na-enyocha nke gị.
Echere m na ọ bụ n'ihi na anyị nwere mmasị yiri nke ahụ, ma ọ nwere ike ịbụ otu ahụ. Mana ọ dị ka ọ dakwasịrị ya na ọtụtụ ndị na - agụ ya.
Achọpụtala m ụfọdụ ọmarịcha ngwongwo na Daily Reads gị. Ma eleghị anya, ị nwere nkà maka nzacha site na ihe ndị anyị na-eche 🙂
Jun 7, 2007 na 6:57 AM
Nke ahụ bụ n'ezie ihe m na-eme mgbe nke ahụ gasịrị, Tony. Adịkarịghị m họrọ njikọ dị na mpụga isiokwu mpaghara nke blọọgụ m… na m na-agụ isiokwu ndị ahụ ma nwee mmasị na ha tupu ịde ha!
Achọtara m ha site n'ọtụtụ nnabata [mkparị], gụnyere ihe nchọta Nchọgharị Nchọgharị, blọọgụ, saịtị ibe edokọbara, wdg.